Ọ bụrụ na ịnọghị na nkọwa ahụ, ka anyị lelee tweets Irsay site na Disemba 31st:
Imeri A PRIUS NA $ 4K — Ur tweet MUST nwere aha gị dị ka ọ na-egosi na ọkwọ ụgbọala gị ikike na-agụnye @jimirsay NA #gocolts.
Cheedị echiche! Nnukwu ahia na-achọ ihe nchekwa data dị ọcha, nke ziri ezi, na-agafe agafe. Mmepe nke teknụzụ ọhụụ dịka Twitter pụtara na enwere ụzọ ọhụụ iji ruo ndị mmadụ, mana n'otu oge ahụ, ọ bara uru nke ukwuu inwe ike ijikọ ndị na-akwado ya na akaụntụ Twitter.
Were anya, dị ka ihe atụ, na onye ọrụ Twitter @ Nwabuezeigbo. Can nwere ike ịsị na ọ bụ nnukwu NFL onye ofufe naanị site n'ịgụ Tweets ya. Mana enweghi ụzọ ịmara onye ọ bụ, ebe ọ bụ na onye ọrụ a enyeghị aha na profaịlụ Twitter ya. N'ezie, ọtụtụ mmadụ na-eji aha nnabata, aha mbụ ma ọ bụ aha nick na ntanetị. Enweghị ụzọ dị mfe iji zoo aka na data gọọmentị niile ị nwere ike inwe na mmadụ, dịka ịzụta akụkọ ihe mere eme, nchekwa data ahịa, wdg.
Jenụwarị 3, 2011 na 3:20 PM
Ma…. ọ ruru $ 30,000? Ha ga-eme ihe ọ bụla na data ahụ?
Jenụwarị 3, 2011 na 5:24 PM
Ọ bụ nnukwu echiche… mana gịnị bụ ROI? Mgbe mbụ m gụrụ tweet banyere nkwalite na Saturday @jimirsay nwere ihe dịka ndị na-eso 18,000 +. Naanị m enyocha ma ọ bụ ugbu a 20,000 +. Ego ahụ ruru puku abụọ ndị na-eso ụzọ ọhụrụ?
Jenụwarị 3, 2011 na 6:11 PM
Enwere m obi abụọ na ọnụ ahịa ahụ ruru $ 30k. Anyị maara na ọ dịkarịa ala $ 4k na ego. O nwere ike ịbụ na ha nwetara ụgbọ ala ahụ na-enweghị ọnụ ahịa ọ bụla gbanwere maka azụmaahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ndị Colts jiri data ahụ, yabụ ee, ọ bara ezigbo uru $ 4,000. Ọ ga-ewe ọtụtụ ndị otu ọtụtụ izu iji gafere ndị niile na-eso ụzọ Irsay ezigbo ndị mmadụ, mana nke ahụ agaghị ekpuchi ọtụtụ ndị ọrụ Twitter ndị ị na-enweghị ike ịkọwapụta.
N'ezie, enwere ozi ọzọ: Onye ọ bụla nwere ike inweta ndepụta a ugbu a, ọ bụghị naanị Colts. Nke ahụ kwesiri ịgwa gị ihe ọzọ gbasara mkpọsa a.
Jenụwarị 3, 2011 na 10:37 PM
Ikwesiri itinye aka na ego nke 'otutu uzo' mgbe ahu. Kwuo na ị ga-atụgharịrị mmadụ 1 ihu na 3 nkeji ọ bụla, ma ọ bụ 20 elekere. Maka ndị na - eso ụzọ 20,000, ị na - ele 1000 awa ọrụ. Tụfuo ya na ọnọdụ ntinye data $ 10 / awa kwesịrị ekwesị, ma ị nọ $ 10,000 ọzọ maka ụgwọ. Ugbu a ị laghachila $ 14,000 ma ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ bụ n'efu, $ 30,000 + ma ọ bụrụ na ọ bụ na ego.
(Oh, ma ị ka mma ka ha malite na ya taa tupu search.twitter.com na-ehichapụ ya niile n'ime ihe dị ka otu izu hahahaha! 🙂)
Echere m na Irsay dị ebube na-ewu uzu, na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu okwu, wdg. Echere m na anyị ga-ahụ ya n'anya niile iji jiri data dịka ọ nwere ike bụrụ na ọ kwesịrị ịdị, mana m echeghị n'echiche na ọ na-eme.
Gịnị bụ ebumnobi ya? Mee ka ndị mmadụ na-ekwu okwu ma na-enwe obi ụtọ banyere Colts (na ya), ma gaa n'ihu na-egosi na o nwere ọtụtụ ego ma nwee ike inyefe ihe. Ndi enye ama okụt unen ke oro? Yup.
Jenụwarị 3, 2011 na 10:22 PM
ROI isnt dị na Twitter na-eso ụzọ Steve. Enweghị ụzọ ị ga-esi atụ ROI nke ihe dị ala dị ka nke a. Ọ bụghị banyere mmadụ ole na-eso ụzọ Irsay nwetara ya banyere ihu otu nzukọ na-ekwupụta n'obodo niile. Hụ na ọ bara uru maka ụlọ mmanya niile ha na-enweta site na geeks ahịa dị ka anyị. A na-ere egwuregwu ndị a tupu oge eruo ka ndị ọzọ karịa ahịa ahịa ndị Colts enweghị ohere iji melite ROI ha site na ikwu.
Ndị Colts nwere ike inweta ego site na tiketi… mana a na-enweta ntakịrị ihe site na nkwado. Haziri nzukọ na-akwụ ụgwọ maka nnukwu nọmba. N'adịghị ka ụlọ ọrụ na-ahụkarị, ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu na-arapara n'ahụ. Ajuju ka mma kariri - gini bu uru nke onye agha Colts na ndu ya? na Jim Irsay mere Colts ọ bụla site na ime nke a? Echere m na o nwere ike. Ike gwụrụ ndị mmadụ otu egwuregwu na-ewerekarị… nke a bụ ngosipụta mara mma nke inyeghachi ntakịrị.
Jenụwarị 11, 2011 na 2:45 PM
Ọ bụghị banyere ROI, ndị na-eso ụzọ, ma ọ bụ ụgwọ. Ọ bụ maka egomaniacal ramblings nke otu ijeri ego nwere ego karịa uche. Echere m n'ezie… ọ kwụrụ $ 1M maka ụbọ akwara Jerry Garcia. You na-eche n'ezie na ọ na-echegbu onwe ya banyere $ 30k?
Ezie na m kwenyere na ego na uche enweghị ihe jikọrọ ha, ejim n’aka na m kwenyere na Irsay bụ egomaniacal. N'ọtụtụ oge, Irsay emeela ihe niile iji zere ihe ngosi. Mụ na ụfọdụ ndị nwere ọtụtụ kọntaktị na-arụ ọrụ ma gwa m na ọ bụ onye dị ịtụnanya nwere obi dị nro. Ọ bụrụ n ’inyocha ihe ụfọdụ, ị ga - ahụ na ọ na - edobe ọtụtụ ọrụ ebere na - aga ebe a na Indiana.
onye n'ezie meriri ụgbọ ala?
Jenụwarị 3, 2011 na 3:32 PM
M na Brad na nke a, ụdị. Robby nwere nnukwu echiche na Colts ga-eme ka ozi ahụ sie ike. Enwere m obi abụọ na ihu na ihu n'ihi na ha nwere otu n'ime ihe kachasị njọ (n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị) na-egosi na mmekọrịta mmadụ na ibe maka otu ndị otu. Ugbu a nyere ndị Fans ha ọtụtụ ihe ha rịọrọ maka ha na ntanetị ma ọ dị mma mana ugbu a Irsay na-ekwu okwu iyi ya na ịnye tiketi na ụgbọ ala apụtaghị na nzukọ ahụ agbachaala. Usoro nke asọmpi ahụ na-egosi onye nwere ụfọdụ ihe ọmụma Twitter na-abanye na ntị Jim. Ikekwe Doug na enyi ya Pat Coyle nwere ike ịgwa Colts okwu dị ka nzukọ ka mma karịa m. Uru ọzọ dị na nke a bụ maka ndị na-akwado ya n'ọdịnihu. Toyota nwetara nnukwu ụlọ mmanya na nke a, ọ bụ ezie na ha gaara enwetakwu enyemaka n'aka Jim na ndị na-ere ahịa na mpaghara ha enweghị ike ịkwalite ya ma nye ya ohere dịka ha nwere ike. Otu ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ na-achọ mmekọrịta na Colts ga-agbachi ibe ha na azụmahịa dị ka nke a. Ọnụ ego ndị Colts nwere ike bụrụ ihe ọ bụla maka ụgbọ ala ahụ ma ọ bụ belata ọnụ ala n'ihi mmekọrịta Toyotas na ndị otu (ụgbọ ala nwere ike ịbụ otu ọnụ ala n'okpuru $ 20k ma ọ bụrụ na ha akwụ ụgwọ ya) ahaziri gburugburu ha & ngwaahịa ha mana mgbasa ozi anaghị afụ ụfụ. Ọ bụ nnukwu ihe ịhụ ka tweets Irsay na tweets anaghị asacha kama site na azụmaahịa m ka na-ahụ ohere na ohere maka imeziwanye.
Jenụwarị 3, 2011 na 6:07 PM
Ma ọ bụ ikekwe Robby nwere ire ya nke ọma na agba ya.
Ọ bụrụ otu a, ọ dị ezigbo egwu.
Jenụwarị 3, 2011 na 10:24 PM
Jenụwarị 11, 2011 na 2:43 PM
Ọ bụ otu nde mmadụ. Ọ na-eji $ 30k arịgoro n’elu akwa. Kpọrọ ihe, ọ bụghị banyere ego. Ọ bụ gbasara ego.
Mara mma amamiihe m ga-ekwu.
Dabere na iwu Jim / Irsay / ego inye ego, iwu achọrọ iji tinye aha gị ka ọ dị na ikikere ọkwọ ụgbọ ala gị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ maka ebumnuche ntinye data, echere m na ọ bụ iji gbochie aghụghọ. O nwere otu-tweet-kwa-onye oke; a ga - eme ka ị ghara iru eru maka ọtụtụ tweets. Iwu "aha zuru oke" na-akụda ọtụtụ amụma sitere n'aka onye nwere ọtụtụ akaụntụ Twitter.
Jenụwarị 11, 2011 na 2:41 PM
Enweghị m ihe mere m ga-eji kwenye na e nwere ọgụgụ isi ọ bụla n’azụ nkwalite ahụ. Ihe ọghọm obi ụtọ, mana ọ bụghị ọgụgụ isi.
Jenụwarị 15, 2011 na 6:54 PM
Ọ na-eweda gị ala mgbe niile onye ama ama (@jimirsay) sonyere na Twitter wee gafee ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ọ were gị ọtụtụ afọ ịgbakọta… n'ime izu ole na ole!